I kuphela imifanekiso ezinye kwidispleyi, ngaba zisinika kowuteshini? Ukuba akunjalo, yintoni enye ekufuneka kufuna?
Uxolo asikwazanga azicaphule esekelwe nje umfanekiso, ubuncinane sifuna zokulinganisela ngamnye iimfuno ubume, ubukhulu kunye nomgangatho kuzo umbandela, ubuninzi efunekayo, inkcazelo malunga nokusetyenziswa kwayo, yaye ingcaciso imveliso ekufuneka ziboniswe.
Ndingayifumana umzobo, ngaba kwanele?
Ok, kodwa nceda uphawule iinkcukacha ezinxulumene njengoko kuchaziwe kangangoko kunokwenzeka: imilinganiselo and explanation, thickness and quality requirements for the material, quantity required,the description for its usage, and the information of the product which need to be displayed.
Mna design concept
Ok, kodwa nceda uqaphele iinkcukacha ezinxulumene njengoko kuchaziwe kangangoko kunokwenzeka: umlinganiselo, ubukhulu kunye neemfuno esemgangathweni umbandela, ubuninzi efunekayo, inkcazelo malunga nokusetyenziswa kwayo, yaye ingcaciso imveliso ekufuneka ukuba sibekwe
Oko kuya kuba ngcono, ukuba le ngcaciso ilandelayo iza kufumaneka, kuya kuba igqibelele:
Imveliso ekufuneka ziboniswe
Artwork ukuba nayiphi na inkampani, faka graphic / iphepha, uphawu okanye ushicilelo isicelo.
Pantone inombolo umbala zokushicilela silkscreen.
Yintoni na mna eyam xa ufuna ukubonisa ukuba wena?
Nceda unike ezi zilandelayo xa ufuna iyunithi ukubonisa elungelelanisiweyo:
1. ubungakanani mhlawumbi oda yakho yokuqala.
2. Isethi epheleleyo imizobo zobugcisa kuya kuba ngcono locaphulo yethu, imveliso okanye ukuqonda iimfuno zakho.
3. Ukuba awunalo umzobo yobugcisa, a ingqiqo (uyilo) umzobo legalelo (okanye umzobo) kunye ngobukhulu ezibalulekileyo kunye ingcaciso iza kuba olusebenzisekayo.
4. Iinkcukacha iimveliso zakho kuboniswa kwiyunithi ukubonisa: Imilo, ubukhulu, ubunzima, eziphathekayo, picture njl, ngenxa yokuba kufuneka ukuba aqulunqe / ukuvavanya uboniso ngokusekelwe iinkcukacha imveliso, isethi epheleleyo iisampuli iimveliso zakho kuza kufuneka ukuba livavanye le yunithi ukubonisa phambi kokuba ndinimise isampuli lokugqibela.
5. Ukuba isiboniso imfuneko sakho ukuze sibekwe phezu ezishelfini, nceda usinike iinkcukacha kwithala: Imilo, ubungakanani, umngxuma indawo mdlalo, eziphathekayo, picture njl
Yiyiphi inkcazelo efunekayo ukuze ikowuteshini, kwaye ngubani ulwazi olusisiseko olufunekayo kufuneka akhoyo kowuteshini?
1. Kufuneka umlinganiselo kwisakhiwo ngalinye yelungu ngalinye,
2. ubukhulu kunye neemfuno esemgangathweni umbandela,
4. bume ekufakeni kunye neenkcukacha
5. inani efunekayo,
6. inkcazelo malunga nokusetyenziswa kwayo, yaye ingcaciso imveliso ekufuneka ziboniswe.
7. Iinkcukacha Ukupakisha
8. Artwork ukuba nayiphi na inkampani, faka graphic / iphepha, uphawu okanye ushicilelo isicelo.
9. Customer ulwazi olusisiseko, qhagamshelana
igama 10. Price
njani Kungekudala ukufumana ixabiso (kowuteshini)?
1. imizobo Ukuba ebanzi inikwe, okanye inkcazelo enenkcukacha zonke ezikhoyo ikowuteshini , ngokuqhelekileyo sikwazi ukunika ixabiso kwiintsuku-2, uza kubonelela locaphulo kungekudala ngokungqinelana nemeko ngqo lo msebenzi.
Izinto ezininzi okanye izinto bazixakekisa kuthatha ixesha elide kakhulu.
ixabiso Basic (ngaphandle iinkcukacha nokupakisha, okanye ixabiso ex-msebenzi) kungaba ngumboneleli ngokukhawuleza.
Gqibezela locaphulo (kunye neenkcukacha nokupakisha, ubunzima, ixesha ekhokelayo isampula kunye nemveliso njl) iza kuthatha ixesha elide kakhulu.
2. Ulwazi ayiphelelanga, locaphulo ingenziwa ngaphandle imizobo, ucaphulo kwiintsuku ezi-3.
3. Kufuneka ukuba kuyilwe kuqala kwandule anike ikowuteshini, ngokuqhelekileyo kufuna kwiveki 1 ukunika locaphulo . Liya kubonelela locaphulo kungekudala ngokungqinelana nemeko ngqo lo msebenzi.
Ziziphi izinto eziphambili ungakwazi ukuvelisa?
ukubonisa acrylic, ukubonisa ukuma, ukubonisa kwikhabhinethi, ukubonisa izithambiso, kwithala uthengisa, iimveliso PC, iimveliso PETG njl
Yintoni enye uyakwazi ukunikeza?
ukubonisa iplastiki, iimveliso Inaliti, PVC extrusion, umnini PVC, ukubonisa ngomthi, ukubonisa metal njl
Yintoni MOQ kwemveliso WEDAC?
Ecacileyo acrylic ukubonisa: 100pcs
Ezimibala ukubonisa acrylic: 500kgs
Sheet metal ukubonisa stand: 100pcs
ukubonisa yeplastiki zifakwa: 1000pcs
Yintoni le yesiqhelo ebezithunyelwe ngendlela iimveliso ezahlukeneyo?
1. ivale Jikelele: ibhegi 1pc / PE / ibhokisi yangaphakathi, iiPC eziliqela / Carton, okanye iiPC eziliqela kwi ibhokisi yangaphakathi, ngoko iibhokisi N kwi ibhokisi ..
2. ivale Bulk: N iiPC ibhokisi, kunye ezithile ngaMoya.
3. Leenyosi ibhokisi, ebhokisini ngomthi, amatyala zomthi, alephuze amagwebu umkhuseli, pallets zomthi, pallets zeplastiki njl ngenxa ukhetho.
Cebo liphi na endingalikhetha intlawulo ntoni WEDAC amukela?
WEDAC yamkela intlawulo zilandelayo:
1. T / T-50% kwangaphambili njengoko idipozithi, kwaye intsalela emva ikopi B / L.
2. LC uwubona
3. Enye indlela yentlawulo ukuba kuxoxwe kwaye zivavanywe ngokuba nganye imeko eneenkcukacha.
ixesha ekhokelayo isampula nokuveliswa: Sample iintsuku 3-15, imveliso Mass iintsuku 15-50.
Umhla wokuphelelwa ikowuteshini: iintsuku Ngokuqhelekileyo ngaphakathi 30 kuphela.
Isampula ukunika ixabiso:
Ixabiso ≤10 zeedollar, ezamahala, kodwa intlawulo yekhuriya kufuneka abe noxanduva ngumthengi.
Ixabiso> 10 zeerandi, ixabiso Sample = unit ixabiso x 3 + yekhuriya ntlawulo kufuneka abe noxanduva ngumthengi.
Ukuba imveliso kufuneka ukuvula ukungunda, ixabiso isampuli kufuneka ziquka indleko umngundo.
Umthengi Ungasebenzisa T / T, Paypal, entshonalanga union, moneygram, & nayiphi na indlela ukwenza intlawulo yeendleko isampula.
ixabiso yakho aphezulu:
Ewe, mhlawumbi ixabiso lethu iphezulu kunezinye, kuba asizange usebenzise izixhobo zokwakha phantsi okanye usike iikona kwaye babuye ngempahla sub-esezantsi, asizange ukunciphisa umgangatho umsebenzi wethu ukunciphisa iindleko imveliso yethu, asifuni ukuba bonakalise yokurhweba umxumi yethu kunye neemveliso ezimbi, sinethemba iklayenti bethu kwaye wethu kungenelwa kunye ishishini efanayo.
Ngaba inani ukucatshuliweyo-thethwana okanye lincitshiswe?
Ewe, qiniseka, ukuba QTY., Iintlobo zezirhubuluzi. okanye imigomo nemiqathango njalo-hlengiswa, okanye ukuqonda ngokwaneleyo nokuhloniphana lusekiwe.
Kuthekani isampuli ayivunyelwanga?
Siya ukulungisa nokubonelela isampuli entsha kwakhona ngaphandle kwentlawulo.
Ndibeke umyalelo. Ngoku kuthweni?
Siza update imeko yemveliso kunye imifanekiso evela mveliso. Siza kulandela inkqubo imveliso kunye nomgangatho wemveliso, qiniseka yonke into ukuhlangabezana umgangatho wakho umgangatho, qiniseka akukho nto iphosakeleyo phambi kokuba iimpahla ushiye efektri yethu! ...... .kwaye ungalindela ukufumana iimpahla ebezi emva kwexesha yemveliso (obekiweyo ngendlela) kunye nexesha yokuthumela (elwandle okanye nomoya).
Ngaba uza kuyihlaziya thina imeko yemveliso kunye nemifanekiso emva ukuze ibekwe?
Ewe okuqinisekile. Siza kulandela inkqubo yemveliso kwaye akugcine oluhlaziweyo.
na ukulawula njani umgangatho mveliso?
Thina QC 3, hlola yonke ngemihla, yonke imveliso iya kuhlolwa kwinqanaba amanqam, ezifana, izinto zokwenza imveliso, semi-kwimveliso, imveliso agqitywa, epakisha njl ..
Kuthekani nokuthumela zokuhamba? Ingaba unayo arhente yokuthumela ethembekileyo okanye forwarder?
Ewe sibe arhente & forwarder ethembekileyo yokuthumela ukusebenza nathi iminyaka emininzi, kodwa ungasoloko lokuzisa iimpahla kumazibuko zakho ekhuselekileyo.
Ukuba senjenjalo FOB, ngaba kwamkela elijongene forwarder?
Ewe, kodwa forwarder kufuneka luvunywe yi nathi ngaphambi kokuba ncwadi isithuba nabo, hleze forwarder omela ngqiqweni kuthi okanye safumanisa iingxaki kunye nabo, siya kuba nelungelo lokucela ukutshintsha lowo nengqiqo, okanye uncome onjalo kuwe.
Kuthekani amaxwebhu lokuthumela?
Ngokubanzi siya kubonelela invoyisi, epakisha uluhlu kunye Ibhili invoyisi njengoko amaxwebhu eenqanawa, ukuba umthengi ufuna naluphi na amanye amaxwebhu, nceda usazise kwangaphambili.
Emva kokufumana impahla, ukuba umonakalo okanye iimveliso ezineziphene ziyafunyanwa, sifanele senze ntoni?
Nceda thatha imifanekiso uze uthumele kuthi ngokukhawuleza, siya endaweni kuyo ngolwandle elilandelayo.
Ukuba ukubeka umyalelo ngokuphindaphinda, ngaba ixabiso libengaphantsi okanye nje ukugcina iyafana umyalelo wokuqala?
Siza kukhe ixabiso ngokusekelwe okunanisa lwemali kunye iindleko eziphathekayo / ndabulaleka ngenxa kokufumana umyalelo phinda, uze wenze utshintsho ngokufanelekileyo.
Ingaba umzi-mveliso / umvelisi okanye inkampani nje urhwebo?
Thina umenzi kodwa kwakhona ukwenza urhwebo xa kuyimfuneko.
Bangaphi abasebenzi zizonke inkampani yakho?
Kukho awukho 25 abasebenzi kwi mveliso.
Yintoni umthamo lwemveliso yakho?
Malunga USD500000 nemveliso ukubonisa okwangoku, kodwa sinako kwandisa amandla ethu kwimveliso ngokukhawuleza.
Yintoni ngoku umthamo wakho yokuthengisa?
USD3 Izigidi ngonyaka ngamnye.
Kutheni ukhetha ukubonisa acrylic?
1. Ngo-World Wall Ⅱ 1939-1945, njengokuba plexiglass okhethekileyo, acrylic yayisetyenziswa okokuqala ngokubanzi njengoko ifestile xa moya imfazwe kunye namatanki, ubomi inkonzo kwiminyaka engaphezu kwama-10 ngaphantsi bume kakhulu.
2. acrylic unezinga eliphezulu elubala, kwaye izinga yokosulela ukukhanya ukuya ku 92-93% --- ngaphezulu kwe glass! Ngoko ke has udumo "crystal zeplastikhi".
3. ukukhanya kwayo ikhangeleka ithambile, ukhululekile, kunye nobuhlakani (ezifana diamond)!
4. enokumelana imozulu kakhulu, epically yangaphandle, zodidi phezulu kweplastiki. Ukusebenza okulungileyo lobushushu eliphezulu, iqondo ubugqwetha malunga 96 ℃ ( 1.18MPa ) . Ukumelana Good sezulu, ukumelana acid kunye kwealkali, akukho ngxaki yokusetyenziswa yellowing kunye haydrolisis emva kweminyaka sesichengeni phantsi kwelanga kunye nemvula.
ubomi 5. yokusebenza Long: Xa kuthelekiswa nezinye izinto (ezifana PS, AS, PP njl), ubomi yokusebenza iminyaka emithathu elide!
6. eXcellent anti-ukuguga intsebenzo emoyeni: experiment yesampulu avavanywe ukuba: emva kweminyaka 4 lokuguga zendalo, , ubunzima imveliso acrylic kaThixo zendalo, , amandla ndisolulela, kunye transmittance ukukhanya incitshiswe kancinane zendalo, , umbala Uyenze kancinane tyheli zendalo, , uxhathiso crazing ukunciphisa ibonakale, Noko ke, ukusebenza anti-nefuthe banda esikhundleni, kunye nezinye yokusebenza physic phantse akukho utshintsho!
7. unezinga eliphezulu yokuqaqadeka komhlaba kunye isilungiseleli seglosi,
8. Kuye kakhulu & ebalaseleyo yokusebenza awokuvelisa, ngaba lisekwa ubushushu, ndibe kwenziwa machining ngoomatshini.
9. acrylic ingenziwa ibe ezahlukeneyo iimilo kunye nemveliso ezifunekayo. Inkalo ebalaseleyo kukuba ahlale iqondo eliphezulu elubala kunye degree eliphezulu ubukhulu.
10. ezincinane, cheapness, kulula ukuba shape.
11. izinto acrylic iye degree kwamazwe eliphezulu yobumhlophe kwakunye iingenelo zilandelayo: ubulukhuni ezilungileyo, kungabi lula; repairable; ngayo texture soft, kungekho ngqele bit ebusika. Kuye imibala ezininzi, iintlanganiso imfuneko ezahlukeneyo. Iimveliso ezenziwe acrylic, kodwa obumangalisayo kuphela, kodwa kunyamezeleka.
1) abuya yawo ifana ne lwamathambo yokuba bomntu.
2) izinto Inkunkuma kufuneka zisebenziseke isetyenziswe, recycling kulula kwaye elula.
3) Izinga enokurisayikilisheka High, Khawuxhase ulwazi lokusingqongileyo uya
4) Akukho monomer eyingozi okanye ivumba baya kukhululwa.
5) ukhuseleko lokutya, akukho nto imbi emzimbeni womntu.
ukonga 13. Energy: degree Kakuhle transmission ukukhanya, ukuya ku 92-93%, ngamandla ngaphantsi ukukhanya
efunekayo, ukunciphisa izibane, ogcino lwamandla, okusindisa amandla kunye neendleko.
14. ukumelana nempembelelo Strong, izihlandlo ezilishumi elinesithandathu ngaphezu iglasi eziqhelekileyo, ifanele ufakelo kwindawo ekhuselekileyo ukulungiselela abaneemfuno ezizodwa.
15. Intsebenzo zokuvala Good, ifanele ezahlukeneyo izixhobo zombane.
16. ubunzima Light, isiqingatha ubunzima ngeglasi zesiqhelo.
17. isiSwati, iqondo eliphezulu nokubengezela, nanto kwezinye izinto.
18. plasticity Strong, kulula udini.
19. Easy ukuba agcine, kulula ukuba ukucoca, amanzi angakwazi uhlambulukile ngokwendalo.
20. texture Soft, bevakalelwa noko liyabanda iglasi okanye yodongwe ebusika.
21. Bright in umbala, kumkhawulela ukusukela ngamnye umgangatho wobomi.
22. Ukusebenza Zintle ukuba yoshicilelo okanye ukutyabeka, ukuba kusetyenziswa woshicilelo ofanelekileyo okanye sokutshiza iteknoloji ukutyabeka, oko kunika imveliso acrylic umgangatho uhombiso isiphumo efanelekileyo & sengqondo.
23. ukunyamezela Good, efanayo ne-aluminiyam, uzinzo oluhle imichiza, uyakwazi ukunyamezela ukukhusele kwezinto ezininzi imichiza.
24. olungiswe ukhuselo izibane zangaphakathi, sandise ubomi inkonzo kwezibane.
25. kunyamezeleka nomlilo, ngaphandle yokutsha ezizenzekelayo self ucimayo.
26 Kukho nto eziphathekayo acrylic eye yokusebenza ezahlukeneyo & ezininzi, umbala ezahlukeneyo kunye neziphumo ezibonakalayo, akwazi ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo abathengi.
27. nomthelela kakhulu ezibonwayo emva processing efanelekileyo, uhombiso kunye noshicilelo.
Yintoni umahluko phakathi ukubonisa acrylic kwakunye nezinye izinto? Acrylic vs Glass
Kushishino, izinto acrylic abe nokusetyenziswa banzana ngaphezu izinto iglasi, njengoko ineendlela ezininzi ngaphezu izinto yeglasi.
1. Kwimeko inkalo processing, acrylic unako-hlulwa ibe iifom phi kunye neemilo ngaphezu negilasi.
2. Bobabini zibuthathaka, izinto ke acrylic guquka ngaphezu kwiglasi. Xa ikhefu iglasi, oko ezaphule laziinyama ezibukhali esinokusirhawula buhlungu abantu; ngelixa acrylic waphula laziinyama ezinkulu, yaba buthuntu, akayi buhlungu abantu. Ngokuthelekisa izinto ezimbini, enye bakhetha izinto engenabungozi acrylic.
3. Zombini ukhuseleko eliphezulu kwibakala ukutya, uzinzo lwekhemikhali zendalo, , ukunyamezela ukhukuliseko jikelele amachiza, hayi enyibilikayo ngamanzi.
4. Kubonakala ukukhanya irhasi zendalo, , UV zendalo, , ubunzima ngu 1/2 ngeglasi eqhelekileyo.
5. irhasi Ukukhanya 92-93% zendalo, , iplastiki oqhelekileyo ngaphaya (PS, AS, PVC njl) iye irhasi ukukhanya nje kancinane ngaphezu kwama-80%.
6. Ukusebenza Anti-impembelelo yi 12 ~ 18 amaxesha zeglasi lesilicon zesiqhelo.
7. ngamandla Mechanical kunye bhetyebhetye ngokuphindwe 10 ngaphezu iglasi lesilicon eziqhelekileyo zendalo, , Ukuqinisa ezifana-aluminiyam zendalo, , uxhathiso yezulu ebalaseleyo kunye nokumelana nokuguga.
8. Outlook Kuyaphawuleka ezintle zendalo, , anawo ngumkhenkce-ezifana isilungiseleli seglosi emva kokuba ipolishi zendalo, , owayesaziwa "Mchako Plastic Crystal".
Differerence phakathi ukubonisa acrylic kunye PS zenyuse ukubonisa:
1. Le ukubonisa acrylic ukhangela ngaphaya kwaye cute ngaphezu PS zenyuse ukubonisa yokubeka, kwaye unezinga eliphezulu umphezulu isilungiseleli seglosi, anawo ngumkhenkce-ezifana isilungiseleli seglosi emva kokuba ipolishi ,; ukusebenza elisemagqabini yoshicilelo okanye ukutyabeka, ukuba kusetyenziswa woshicilelo ofanelekileyo okanye sokutshiza ukutyabeka workcraft, oko kunika imveliso acrylic ukulinywa komhlaba uhombiso iinzame & sengqondo. Ngoko ke iye nanto Outlook olubalaseleyo ezintle.
2. acrylic unobomi elide zentsebenzo ngaphezu PS, ubuncinane iminyaka emithathu elide ebomini nkonzo.
3. Lo mboniso nedawo acrylic akuyomfuneko ukuvula ukungunda, ngoko akukho kweendleko sokubumbela kuya kwenzeka, yaye ubukhulu bayo kunye nesakhiwo nako kwenziwa lula naliphi na ixesha.
4. Nangona kunjalo ukubonisa acrylic iphezulu kakhulu unit iindleko kwe PS zenyuse ukubonisa.
5. PS zenyuse ukubonisa yokubeka ayibizi kakhulu ixabiso iyunithi, nangona kunjalo kufuneka ukuvula ukungunda ekuqaleni kwaye ngeendleko sokubumbela ukuhlawula ngaphezu.
6. acrylic uye endurability babomelele phantsi bume yangaphandle, oko enokumelana imozulu ebalaseleyo.
7. acrylic Ininzi yokusebenza anti-UV, intsebenzo anti-ukwaluphala.
8 Zombini ethe, ngokuhlaziya phantsi lobushushu eliphantsi.
9. PS uye yokusebenza inaliti ngcono, efanelekileyo imveliso kunye nenani elikhulu. rate Small siyehla kwimveliso, ubungakanani uzinzile.
10. PS emva kokudibana phantsi kwelanga, kulula ukuba elityheli kunye ukufiphala.
2. acrylic unobomi elide zentsebenzo ngaphezu PP, ubuncinane iminyaka emithathu elide ebomini inkonzo
4. Nangona kunjalo ukubonisa acrylic iphezulu kakhulu unit iindleko kwe PP zenyuse ukubonisa.
5. PP zenyuse ukubonisa yokubeka ayibizi kakhulu ixabiso iyunithi, nangona kunjalo kufuneka ukuvula ukungunda ekuqaleni kwaye ngeendleko sokubumbela ukuhlawula ngaphezu.
6. PP ithambe, kungekhona yomelele kwaye kunzima nje acrylic.
ukungafihli 7. PP kaThixo azilingani nabo arylic.
8. acrylic uye endurability babomelele phantsi bume yangaphandle, oko enokumelana imozulu ebalaseleyo.
9. acrylic Ininzi yokusebenza anti-UV, intsebenzo anti-ukwaluphala.
Ukubonisa acrylic ukhangela selubala kwaye cute ngaphezu PETG nesakhelo, kwaye unezinga eliphezulu umphezulu isilungiseleli seglosi, anawo ngumkhenkce-ezifana isilungiseleli seglosi emva kokuba ipolishi ,; ukusebenza elisemagqabini yoshicilelo okanye ukutyabeka, ukuba kusetyenziswa woshicilelo ofanelekileyo okanye sokutshiza ukutyabeka workcraft, oko kunika imveliso acrylic isiphumo uhombiso kumphezulu efanelekileyo. Ngoko ke iye Outlook nanto & olubalaseleyo ezintle.
PETG ' s yokusebenza anti-impembelelo yi amaxesha 1-3 of acrylic wazomeleza , no-3 ~ 10 amaxesha acrylic zesiqhelo. PETG: Hard, anti-iimpembelelo, kunye kunyamezeleka, phantsi bume lobushushu ngaphantsi kwe -40 ℃ . Iimveliso PETG babe endurability ngokwaneleyo ukuze fabricatio n, uthutho kunye nokusetyenziswa. Isenokuba ukuthintela ukophuka ngempumelelo.
PETG uye ukusebenza elihle kakhulu uyila, akukho abamhlophe emva ukugoba phantsi lobushushu eziqhelekileyo, akukho abamhlophe emva ukugoba ebandayo, akukho iintanda, kulula wokuprinta pops up.
PETG kuba lula ukuvelisa iimveliso kunye nesakhiwo bazixakekisa nangaphezulu elula.
PETG na ukumelana nomlilo, kuba ayiyiyo ezinokutsha, aze amvimbe into engamncedayo, uvutha, nelyo umgangatho zokwakha, akukho into eyingozi emva ngokutshiswa, ekhuselekileyo ngaphezu acrylic.
Anti-UV, kwakufuneka ngokubanzi ukusetyenziswa signages ngaphandle okanye ngaphakathi, Point yokuthengisa, Bonisa leposi, izixhobo zangaphandle, intengiso umnquba, panel zokuzikhusela zabasebenzi Equipments, iphaneli station umdlalo, zenza panel umatshini njl
Yimeko-bume thermoplastic imveliso lula, hayi equlethe ezinye izinto imichiza ngaphandle C, H, Thixo, oko luhlobo ngeplastiki ingaboliswa ziintsholongwane. Iimveliso ezenziwe lo myalezo emva ishiywe, baya kujika namanzi kunye carbon dioxide, Kananjalo kufuneka zisebenziseke ngaphandle ukungcolisa okusingqongileyo.
PETG ibiza ngaphezu acrylic, kodwa zitshiphu PC kwaye zomelele ngaphezu acrylic.
PETG kungqinelana umgangatho zoqhagamshelwano ukutya FDA, oko inokusetyenziswa ukutya, iimveliso zonyango njl, oku kusetyenziswa izinto nokupakisha okanye kwizikhongozeli ezahlukeneyo zokutya ...... kwaye kuso umi lipids kunye kakhulu kwemichiza, nemithi ukuze ukhukuliseko of acid, ialakalin neeoyile njl, oko kuthathwa njenge ekhuselekileyo izinto ukutya kunye nabantu.
PETG liye lasetyenziswa ngokubanzi zeebhotile ivumba kunye ezineziciko zayo, iibhotile izithambiso kunye ezineziciko zayo, zohlobo lwe lipstics, iibhokisi izithambiso, izikhongozeli deodorizer, iibhotile baby powder, iminqwazi eyeliner, njalo njalo kunye neemveliso inaliti PETG: okucoca, tube eustachian, isinxibelelanisi lemibhobho , iimpompo, Iziqhano, kunye dialysis Equipments njl iimveliso zasekhaya ezifana neekomityi, isaladi isitya, saltcellar, ipepile isihlukuhli, ikhadi lebhanki, izikhongozeli amanzi njalo, ekufuneka iimfuno eliphezulu ekhuselekileyo abantu.
1. PVC lithambile, cheap yaye ngokuqhelekileyo thinner.
2. ngaphaya PVC ubukhulu kudla ayikho ngaphezu 3mm.
elubala 3. PVC kaThixo azilingani nabo arylic.
4. PVC akukhuselekanga ukutya, kwaye nendalo.
5. PVC ngokuqhelekileyo sisetyenziswa kunye nezakhiwo acrylic nje inxalenye yomboniso.
Baphela differerent kwi zonke iinkalo: kwinkangeleko, esi elubala, ukuguda noburhabaxa njl
Ezahlukahlukeneyo iinkalo ezininzi, kodwa ubukhulu becala acrylic na ugcino lwamandla, indawo yokhuselo, ke iinkuni kuya kufuneka ukuba ezinobungozi kokusingqongileyo.
Iiyantlukwano ikakhulu ivela njengoko elubala, Outlook, iyahlala nokuqina.
Acrylic vs yodongwe
Ukuthelekisa izinto yemveli yodongwe, acrylic uye isilungiseleli seglosi ophezulu nanto, kwaye iingenelo zilandelayo: bhetyebhetye ezilungileyo, kungabi lula krobo, kulula ukuba kulungiswa, sebenzisa i amagwebu ethambileyo kuphela ngentwana yamazinyo, nako ukucoca i-sanitary nentlahla.
texture Soft, bengaphilanga ukuba kuyabanda ebusika.
Bright ngebala, babedibana ukusukela ngamnye ezahlukeneyo ubomi esemgangathweni.
Nendalo, ukuba imitha liyafana lwamathambo yokuba bomntu.
Yintoni umahluko phakathi uboniso njo kunye nokubonisa zifakwa?
isiboniso njo Akuyomfuneko ukuba ukuvula ukungunda, nesakhiwo sayo kunye yoqwalaselo kwenziwa lonke ixesha ngaphandle kwentlawulo engaphezulu, ngoko oku kuya kongela isixa esikhulu ngenxa yeendleko sokubumbela azinakufaniswa abo lesitofu, yaye qhiwu ukubonisa eziphuma Outlook yayo ezilungileyo azinakufaniswa lesitofu abo. Xa abantu abafuni ukutyala iindleko ukungunda, okanye imveliso ayikho ezifanelekileyo ngenaliti, okanye abantu abafuni ukuvelisa ezininzi ubungakanani wendlela, okanye abantu bafuna ukuzama emarikeni kuyilo entsha, unamathela acrylic ukubonisa iya kuba esingcono. iimveliso zifakwa kufuneka abathengi ukuba utyalo iindleko sokubumbela okanye umyalelo imveliso kobungakanani omkhulu, kwaye xa kuvulwa sokubumbela ibe nye iqale, mayingabi sakhululwa ilungiswe okanye kutshintshwa na ixesha elide. Ukuba ufuna ukuba omnye ongumzekelo uyilo "ngakumbi", kuya kufuneka ukuvula sokubumba entsha kwakhona okanye asebenzise qhiwu kungamampunge acrylic.
Ngaba njo ukubonisa namandla ngokwaneleyo?
Ewe, ukuba uthe musa ukundilahla okanye beme phezu kwayo, okanye sebenzisa uboniso acrylic ukubamba iibhloko iintsimbi.
Yintoni iimpawu eziphambili kunye iingenelo acrylic ukubonisa njo?
isiboniso njo Akuyomfuneko ukuba ukuvula ukungunda, nesakhiwo sayo kunye yoqwalaselo kwenziwa lonke ixesha ngaphandle kwentlawulo engaphezulu, ngoko oku kuya kongela isixa esikhulu ngenxa yeendleko sokubumbela azinakufaniswa abo lesitofu, yaye qhiwu ukubonisa eziphuma Outlook yayo ezilungileyo azinakufaniswa lesitofu abo. Xa abantu abafuni ukutyala iindleko ukungunda, okanye imveliso ayikho ezifanelekileyo ngenaliti, okanye abantu abafuni ukuvelisa ezininzi ubungakanani wendlela, okanye abantu bafuna ukuzama emarikeni kuyilo entsha, unamathela acrylic ukubonisa iya kuba esingcono.
Kuthekani icebo lakho sophuhliso kwixesha elizayo ekufutshane?
Siza kuphuhlisa eninzi uthotho imiboniso acrylic (uninzi lwabo kunye nenkqubo uthengisa, kunye nabanye nezinye izinto ezifana MDF, PC, PETG, sheet metal njl) imida ezahlukeneyo, ezifana izithambiso, namayeza afanelekileyo & zempilo iimveliso, e-icuba, iziselo & iziselo, ukutya mihla le & izinto zekhaya njl, kuba ukusetyenziswa yempahla ethengiswayo, isampuli zokubonisa, ukukhuthazwa intengiso, njalo-
Siza ukuya Globalshop 2015 e Las Vegas e US ngo Matshi 24-26 th 2015.
Kuthekani inkqubo workcraft:
Design okanye ukuzoba zophicotho → Materials Lokuthenga → Laser ukusika → Milling → wokucoca → ubushushu ugoba → Silk yoshicilelo screen → kuncanyatheliswe → Wahlanganisa → uhlolo → ukupakisha → zimpahla
Yintoni eyona Izixhobo yakho?
Laser ukusika machine 5
High speed umzila 2
Diamond wokucoca machine 1
umshini wokugaya othini 1
Umphezulu planer 1
Nelangatye wokucoca machine 2
Table wabona 2
Table mfanekiso machine 1
Precision Ukuqwayita sesitovu 1
Ubushushu ukugoba machine 4
Cuke iwelding machine 1
Ngaba kubonelela imiboniso ngazo naziphi na iintlobo ngamazwe?
Ewe, Loreal, Kaufland, Rimmel, Sally Hanson, Napolean Perdis, K-Mart, Big-W, Watsons, Ukubiya njl
Ingaba unayo isebe QC?
Ewe, sibe QC isebe, 3 QC.
Ingaba isebe R & D?
Ewe, sibe R & D isebe, 3 nabayili.
Ngaba ukunikeza iimveliso ODM?
Ewe, sibe eninzi imveliso ODM. Qho ngenyanga siza kuphuhlisa iimveliso ubuncinane 2-3 ezintsha kunye design entsha.
Kucelwa uthethe iqela lethu kwiintengiso ubacele ngqo nge email, skype , or telephones!
Baya kukunika impendulo ekhawulezileyo and professional!